Nandrolone Undecanoate poda Vagadziri & Vanotengesa - Fakita
Nandrolone Undecanoate inozivikanwa neanabolic steroid inobereka hutano hwakanaka, hunogara huchigadzikana. Izvo zvakare kuora kurasikirwa rubatsiro kukubatsira kuti uremerwe uremu nyore nekuderedza kuwanda kwemafuta anowanikwa.
Raw Nandrolone Undecanoate powder (862-89-5) Tsanangudzo
Raw Nandrolone Undecanoate upfu, vakatumidzwa Dynabolon, ari pachena kwete arongera mukanwa administration.Raw Nandrolone Undecanoate upfu chinhu injectable chimiro anabolic steroid nandrolone, kufanana mapfupi kuita Nandrolone Decanoate (Deca-Durabolin), rave kushandiswa pave kwakaenzanirana uye hunobudirira hunova nesimba uye 'hupamhi hwepamusoro' huzhinji (hutete huzhinji hunogona kuramba huchienda shure-kushandisa zvinodhaka). Izvi zvinoshandiswa pakugadzirwa kwechirwere ichi chinonzi anabolic steroid nandrolone. The Ester rakaiswa pano ndeimwe kabhoni atomu kunopfuura decanoate, uye somugumisiro anoumba zvikuru zvishoma anguve usingaperi zvinodhaka dhipoziti panguva nzvimbo injection.Nandrolone undecylate chinonzi remubatanidzwa kunobudirira unobereka quality, refu-refu tsandanyama achawana. Izvi ndezvikonzero zvehafu yakareba-yehupenyu hwechirwere (kumativi ose e18 mazuva). Kunyange pasina imwe protractedtherapeutic hwindo, Raw Nandrolone Undecanoate upfu inogona wakasununguka jekiseni kamwe ose 1 kuti 2 kwemavhiki, iyo inoratidza ayo anononoka-kuita hunhu. Yakave yakanakidzwa zvikuru nevatambi uye miviri yemuviri nokuda kwekukwanisa kwayo kukurudzira kugadzikana kunononoka muhutonda hwakaonda nemaitiro mashoma esrogenic kana kuti androgenic madhara.
Kemikari Name Nandrolone undecylate; 862-89-5; Dynabolon; Raw Nandrolone Undecanoate powder
muchiso Name Dynabolon, Dynabolin, Psychobolan
Kirasi yeMishonga Androgen; Anabolic steroid; Androgen ester;
Kunyorera Point 53.2 ~ 54.5 ℃
Birara Point 548.5 ° C pa 760 mmHg
APane Raw Nandrolone Undecanoate powder inoshandiswa kukurudzira kuwedzera kukura pashure pokuvhiyiwa kwakakura, chirwere chisingaperi, kana kushungurudzika kwakanyanya, uye mune dzimwe mamiriro ezvinhu zvinokonzera kusakwanira kuwedzera kuwanda kana kuchengetedza. Raw Nandrolone Undecanoate powder inoshandiswa kuderedza kurasikirwa kwemasisita kunokonzerwa nemishonga ne corticosteroids uye kuderedza marwadzo emapfupa anowanikwa neasteoporosis.
Chii chakakonzerwa Nandrolone Undecanoate powder (862-89-5)?
Nandrolone undecanoate powder inozivikanwa neanabolic steroid inowanikwa neyakashanda steroidal hormone Nandrolone yakanamatira kune yakakura zvikuru Undecanoate ester. Yakangofanana zvikuru neNandrolone Decanoate (Deca Durabolin), Nandrolone's Undecanoate ester inowedzera kukura iyo inopa imwe nguva yakareba yehutachiona hwindo.
Iyi imwe nhengo ye nandrolone undecanoate ndiyo ester imwe iyo Organon inoshandisa testosterone yavo yekugadzirira Andriol. Pano iyo kemukari haina pachena kuti inenge yakagadzirirwa kunyatsotungamirirwa, asi panzvimbo iyo yakagadzirirwa kuva iyo yekuita kwenguva yakareba, mafuta inogadzirwa.
Nzira yakakura sei Nandrolone Undecanoate powder (862-89-5) mabasa
Nandrolone Undecanoate (Dynabolon) powder ishanduko yakashandurwa yeNandrolonein iyo escarboxylic ester (undecanoic acid) inowanikwa neboka 17-beta hydroxyl. Esterified steroids ine polarity shoma kupfuura steroid dzisina mahwanda uye inowedzera zvishoma nezvishoma panzvimbo yejojo. Rimwechete muropa, ester inobviswa kuti ibudise pachena (yakashanda) noronon. Esterified steroids yakagadzirirwa kutambanudza firati yekurapa mushure mekushandiswa, kubvumira kusapinda kashoma kudarika kusununguka (kusati kwaonekwa) steroids. Nandrolone Undecanoate (Dynabolon) poda yakagadzirirwa kusunungura Nandrolone zvishoma nezvishoma mukati me3 kusvika kumavhiki masere eE4.
Nandrolone Undecanoate ishizha rinobudirira rinounza hutano, hupenyu hunogara kwenguva refu. Izvi ndezvikonzero zvehafu yakareba-yehupenyu hwechirwere (kumativi ose e8 mazuva). Nhamba inowanzozivikanwa ndeye 3-4 ampules (241.5 kusvika 322mg) vhiki, chiyero chinofanira kupa mukana unogamuchirwa wehutsva hutsva. Zvakakwana kutora 40-70mg yeNandrolone undecanoate powdhi zuva nezuva. Nokuda kweizvi, iwe uchada kutora jekisi rimwe vhiki imwe neimwe. Kuti kuwedzere kushanda kwe steroid, ruzhinji rwevarimi vomuviri huchaparadzanisa jekiseni muC2 duku majekisi ekuenzanisa kwevhiki. Basa iri richaderedza mujenya wehuwandu huwandu. Iwe unogona kuwedzera muyero wako kana iwe ukasungirira 300-400mg pasina matambudziko. Kunyange zvazvo pasina chido chemasero makuru, tinoda kuziva kuti varume vazhinji vanozosimbisa 60mg kwevhiki vasina matambudziko makuru. Zvakakwana kuti tibate ne 400mg. Izvi zvinowanzova nemigumisiro yakaipa kana iwe ukawedzera kuwedzerwa. Mune zvimwe zviitiko, migumisiro yakaipa inogona kuwedzera pane zvinokonzera, kunyange zvazvo izvi zvingave zvakasiyana kubva kune mumwe munhu kune mumwe.
Nandrolone Undecanoate powder inozivikanwa nevanabolic steroid inobereka hutano hwakanaka, hunogara huchigadzikana. Nandrolone Undecanoate powder / Dynabolon inoyevedza steroid yekunze-nguva yemari inowanikwa uye inyanzvi yemitambo inowedzera, munhu wacho anogona kugamuchira zvimwe zvakafanana zveDynabolon nemamwe maNandrolone aripo. Kurovedza kunoderedza misodzi yemaviri, asi kuporesa ndiyo inoita kuti iwedzere uye inoita kuti ikure. Pasinei nechinangwa chako chekushandisa, zvinokonzerwa neNandrolone Undecanoate powder / Dynabolon pamusana pokutsungirira kwemisodzi uye kugadzirisa kuchafarirwa nevose vanowedzera neyi anabolic steroid.
Tenga Nandrolone undecylate powder kubva kuBuasas.com